Ogwe nri China FD 68106 ụlọ ọrụ na ndị na -ebubata ya Na mbụ
YAMATO Original FD machine Feed bar ， n'ihi njirimara ọdịdị nke igwe YAMATO FD, igwe nri nke YAMATO mbụ igwe ịkwa akwa FD dị ogologo karịa igwe ịkwa akwa ndị ọzọ, nke na -eme ka ọ nwee nnukwu nsogbu siri ike imepụta.
Isi ihe isi ike bụ dị ka ihe anọ a:
Nke mbụ, ekwesịrị ịchịkwa ịdị larịị nke ụlọ nri ọ bụla n'ime 0.003. Maka ogologo nri dị ogologo ma dị gịrịgịrị, nkwarụ na -emenyụ ya buru ibu.
Isi okwu nke abụọ, ịdị larịị nke ihe mmịfe etiti dị na ndepụta nri. dị elu, ekwesịrị ịhụ na myirịta nke uzo ihe mmịfe ahụ.
Isi ihe nke atọ, izizi nke oghere mmịfe nke ogwe nri n'ihu bụ otu ihe ahụ dị na oghere ihe mmịfe nke mmanya azụ azụ, iji hụ na ngagharị dị mma nke ụlọ nri abụọ ahụ. Maka nke a, anyị jiri ngwa nhazi pụrụ iche, yana ahụmịhe nrụpụta ọtụtụ afọ.
Isi ihe nke anọ, anyị na -eji oghere adịgboroja, nwere ike nwee nkwa nke ọma na arụmọrụ nke ụlọ nri, mana na -abawanye nrụpụta nhazi yana ọnụ ahịa mmepụta ya. hụ na nkwụsi ike nke nkịta na -eri nri mgbe igwe ịkwa akwa na -arụ ọrụ, yana ma igwe ahụ na -agbapụta mmanụ na mkpọtụ igwe. mmepe na nkwenye nke imepụta oke, nkenke nke ụlọ nri anyị nwere ike gboo mkpa nke igwe ịkwa akwa nke ụwa.
Nke gara aga: Myọcha mmanụ
Osote: ONYE NA -EJI EKERE C.SET
Original Yamato FD akwa akwa ngwa nri nkịta ...
Original Yamato akwa akwa ngwa mkpa Needl ...
Yamato FD Ngwa ngwa nko nko ịnya ụgbọ ala ...